တပ်မတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စဖို့လိုပြီ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| October 18, 2012 | Hits:7,288
| | အမေရိကန်အစိုးရ ဌာနပေါင်းစုံမှ အကြီးတန်းအရာရှိများ ပါဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာရောက်ခဲ့ပြိး ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝီလီယံ ဘန်းစ် လည်း အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ရောက်လာကာ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံမည်မှာ အမေရိကန်သမ္မတ အိုးဘားမားအစိုးရ၏ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မူဝါဒသစ်ကို နောက်ထပ် အဆင့်မြှင့် အကောင်အထည်ဖော်သည့် ခြေလှမ်းဟု ဆိုရမည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့ အမေရိကန် ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာ့ ပို့ကုန် တင်သွင်းခွင့် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်ကလည်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ပင်မှု ရုပ်သိမ်းရေးကို အိုဘားမားက လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်သဖြင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာပြည်နှင့် ပြန်အလုပ် လုပ်ရန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲလာကြရသည်။ ပြိးဆုံးခဲ့သော အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိများပါ ပါဝင်နေသဖြင့် အမေရိကန်၏ မြန်မာ ခရီးစဉ် ရလဒ်သည် စီစဉ်နေဆဲ နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့များ အပေါ် ဩဇာ သက်ရောက်မည် သာမက ဒေသတွင်း အမေရိကန် ဦးစီးသော စစ်ရေးပူးတွဲ လေ့ကျင့်မှုများတွင် မြန်မာ ပါဝင်လာစေရေး လမ်းဖွင့်သွားနိုင်လိမ့်မည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အကျဉ်းထောင်များထဲ ကျန်ရှိနေသေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းစစ်ကို အပြီးတိုင် မရပ်စဲနိုင်သေးခြင်း၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ခွဲခြားတိုက်ခိုက်မှုများ တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေခြင်း၊ လူမှုရေး စီးပွားရေးတို့တွင် မတရားမှုများနှင့် မပွင့်လင်းမှုများ ပျံ့နှံ့နေခြင်း၊ အထူးသဖြင့် စစ်တပ်မှ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင် ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားပြီး လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများတွင် တရားမျှတမှုကို မဖန်တီးပေးနိုင်သေးခြင်းများကြောင့် ပေးရန် စီစဉ်နေသည့် အထောက်အပံ့များနှင့် ထိုက်တန်မှုရှိ မရှိ တဘက်ကလည်း သံသယ ရှိနေသေးသည်။
ယနေ့အချိန်ကား မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် ထို့ထက်ပို၍ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရန် အချိန်ကျပြီ ဖြစ်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့် လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲအဖြစ် သံသယ ဆက်ရှိနေသေးသည်မှာ တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍပင်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်များတွင် ကိုယ်စားလှယ် လေးပုံတပုံကို ယူထားခြင်း၊ ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတွင် အမိန့်အာဏာရှိနေခြင်း၊ တိုင်းပြည်၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိနေသေးသော်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု တသီတတန်း အတွက် တာဝန်မခံနိုင်ခြင်းနှင့် တရားမျှတမှုကို မဖန်တီးပေးနိုင်သေးခြင်းများမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်ရာတွင် လေးဖင့်နေစေသော နောက်ပြန်ဆွဲ အကြောင်းအချက်များ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်၏ လေးပုံတပုံနီးပါး သုံးစွဲနေသော်ငြား တပ်အင်အား သုံးသိန်းခွဲကို လူလုံးထွက်အောင် မထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် “ကိုယ့်ရိက္ခာ ကိုယ်ဖူလုံရေး” အတွက် ရှာဖွေရပ်တည်နေရကာ နယ်မြေခံများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေစေခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့ တရားမဝင် အလုပ်များတွင် ပတ်သက် ဆက်စပ်လာသည် အထိ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်ကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်မှာလည်း အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်အတွင်း လူမျိုး ဘာသာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကလည်း လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားများအကြား သံသယကို ပိုကြီးထွားစေရန်သာ ဖြစ်နေစေသည်။
ကလေးစစ်သား သုံးစွဲမှု၊ အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မ စော်ကားမှု၊ ပေါ်တာဆွဲ၊ အရပ်သားများကို နှိပ်စက်မှုများနှင့် နာမည်ဆိုးဖြင့် ဆယ်စုနှစ်ချီ ကျော်ကြားခဲ့သော မြန်မာ့တပ်မတော်အား ဒီမိုကရေစီနှင့် တံခါးဖွင့်ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ခေတ်မီတပ်မတော်အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်မှာ လက်ရှိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပုခုံးပေါ်သို့ ကျရောက်နေသည့် ကြီးမားသော သမိုင်း၏ တာဝန်ပင်။ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားခြင်း၊ အရပ်သားအစိုးရက စစ်တပ်အား ကြီးကြပ်မှုကို လက်ခံခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိခြင်းတို့ဖြင့်သာ မြန်မာပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာမိသားစုအကြား မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တရားဝင်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Chin Chaung October 18, 2012 - 5:59 pm	excellent article,
right time saying right thing
needs reformation of tatmataw towards more public accepted Institution in terms of promoting democratic society
Reply	ရဲမင်းအောင် October 25, 2012 - 2:26 pm	Our patriotic Military (Army,Navy and Air force) need to upgrade more powerful,
high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and internal enemies .
We support our Military……carry on my fri Sunny.
Reply	မင်းမျိုးနိုင် October 19, 2012 - 6:22 am	တပ်မတော်လို့အခော်ခံနေရသေးတာမောင်ရင်တို့တတွေကံကောင်းတယ်လို့ကျုပ်ကတော့အဲသလိုဆုိုချင်တယ်။တကယ်တမ်းပြန်ပြီးတွေးကြည့်ပြန်တော့မောင်ရင်တို့လုပ်သွားခဲ့ပုံတွေ လတ်တလောလုပ်နေပုံတွေဟာတပ်မတော်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှမဟုတ်ပဲ၊မောင်ရင်တို့လုပ်ရပ်တွေကသူခုိုးဒါးပြတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာယဉ်ကျေးတဲ့မိဘတွေကပေါက်ဖွားလာသူဘယ်သူ့မေးမေးသူတို့ကတော့ဟုတ်တယ်လို့ဖြေကြမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။ ငရဲအိုးဂျိုးမကပ်ရင်တောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမလွဲမသွေတက်ရတော့မယ့်မောင်ရင်တို့အဘတွေသံဝေဂမရကြသေးတာအံ့ပါရဲ့။ ဒီဘူဒါးစစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ကြီးတွေဟာတချို့ပုတီးကောက်ဆွဲပြီးအပြစ်ကလွတ်ရာလွတ်
Reply	မင်းမျိုးနိုင် October 19, 2012 - 6:32 am	တပ်မတော်လို့အခော်ခံနေရသေးတာမောင်ရင်တို့တတွေကံကောင်းတယ်လို့ကျုပ်ကတော့အဲသလိုဆုိုချင်တယ်။
တကယ်တမ်းပြန်ပြီးတွေးကြည့်ပြန်တော့မောင်ရင်တို့လုပ်သွားခဲ့ပုံတွေ လတ်တလောလုပ်နေပုံတွေဟာတပ်မတော်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှမဟုတ်ပဲ၊မောင်ရင်တို့လုပ်ရပ်တွေကသူခုိုးဒါးပြတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာယဉ်ကျေးတဲ့မိဘတွေကပေါက်ဖွားလာသူဘယ်သူ့မေးမေးသူတို့ကတော့ဟုတ်တယ်လို့ဖြေကြမှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူး။ ငရဲအိုးဂျိုးမကပ်ရင်တောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမလွဲမသွေတက်ရတော့မယ့်မောင်ရင်တို့အဘတွေသံဝေဂမရကြသေးတာအံ့ပါရဲ့။ ဒီဘူဒါးစစ်ရာဇ၀တ်ကောင်ကြီးတွေဟာတချို့ပုတီးကောက်ဆွဲပြီးအပြစ်ကလွတ်ရာလွတ်
Reply	aung October 19, 2012 - 12:57 pm	ီိDefense budget is not 1/4, but it is 50%—-amazing
Reply	Aung Kyaw Nyunt October 19, 2012 - 1:00 pm	Very good article highlighting the realities of present Myanmar Tatmadaw. Our Country need Tatmadaw of quality and patriotism as our beloved Tatmadaw who gave their lives for Myanmar Independence in 1940s. Now we really wish our Tatmadaw to go back to their Barracks and serve the people with dignity, integrity, sincerity and professionalism. The people would love to support them and their family for reasonable living standard. They don’t need to rob the properties from the people who are feeding them. Thank you
Reply	khin October 19, 2012 - 2:57 pm	I truely support excellent article and min myo naing’s comment.
Reply	mgoogyaw October 20, 2012 - 12:50 am	Of course,I have totally agreed and supports,this article and all the above comments,which are 100% correct and true. Many people without knowledge or lack of experience in political field,just blindly support to this current Government,who is only shouting for Democracy, But, never follow an inch of Democracy way.Still many many things,have to be change.I know that changes needs time, but till now nothing is strange and change.So, how to believe,that,there will be changes,people are still poor,even some are worse than before,and many Human Rights,99% needs to change.But,the Multi Billionaires Generals and their cronies,can take out their freezing money,outside of Burma, and it is very funny to knows that ,They (Juntas),can cheat the whole world.
Reply	scalpel October 21, 2012 - 3:34 pm	We know that the Burmese army is justapocket army since ’62. They portect their own group of top brass and fill their own pocket endlessly making the country one of the poorest of the world. There is no efective healh care system, educational system is very sub-sub-standard, communiction is almost nil and corruption and bribery is rife. The pocket army has systematically destroyed ther infrastructure system morality for donkey years.
Anyway we start to see the small light at the end of the tunnel. Oppisiton parities are working together, setting aside their own belief and orientatin to only one goal i.e for the freedom. They have strong support from super powers and but we need to be intelligent to take it.
We need to be patient and vigilance. If we are together we can handle the rulers rather than been ruled.
Best of luck and Metta
Reply	sunny October 24, 2012 - 5:02 pm	Our patriotic Military (Army,Navy and Air force) need to upgrade more powerful,
high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and
internal enemies .
Reply	honey November 1, 2012 - 1:17 pm	Our idiotic Military (Army,Navy and Air force) need to uplaid more gayish, powerful, high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and internal imaginary enemies .